स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका आउदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका आउदै
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४ मा प्रकाशित !
११ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुगमनसम्बन्धी बेग्लै निर्देशिका ल्याउँदैछ। आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनमा हुने सबै प्रक्रियाको अनुगमनका लागि त्यस्तो निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै जारी हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
आयोगले यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन निर्देशिका–२०७३, स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति र निर्देशिका–२०७३ भने जारी गरिसकेको छ। आयोगमा पर्यवेक्षण पाऊँ भनी संस्थागत आवेदन दिने क्रम सुरु भएको छ। यस्तै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७३ पनि जारी गरिसकेको छ। निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम ती निर्देशिका जारी भएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति र निर्देशिकामा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन गोप्य मतदानबाहेकका अन्य प्रक्रियामा अधिकतम पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ। सोका लागि पर्यवेक्षक हुने संस्था र व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकास गरी खटाउने आयोगको नीति छ।
PREVIOUS POST Previous post: ओप्पोले नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट एफथ्री प्लस सार्वजनिक गर्दै
NEXT POST Next post: मधेसी मोर्चाद्वारा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकामा तालाबन्दी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:५४